High Frequency Ukuphelelwa ngamanzi emzimbeni Isixwa Screen | Haiside
ISIKHATHI ESIKHULU SOKUPHILA KWEMVAMILE
Isikrini sokudlikiza semvamisa ephezulu sishiswa ngamacwecwe ensimbi asezingeni eliphakeme ukumelana nomthelela onamandla odalwa ukudlidliza. Ngemuva kokuthi umkhiqizo usuphothuliwe, zonke izingxenye ziyaqhubeka zifakwa futhi zifakwa ekwelashweni kokushisa ukukhulula ukucindezeleka. Ubuso besikrini benzelwe ukwelashwa okujwayelekile: i-primer kanye naphakathi kokumboza, ijazi eliphezulu, i-anti-corrosion esebenzayo. Wonke amabhawodi wokuxhuma asebenzisa ama-huck bolts; Kokubili isikrini sensimbi engagqwali nobuso besikrini se-polyurethane kufanelekile kulesi sakhiwo se-flat screen, futhi ingxenye eseceleni yohlangothi nayo ihlangabezana nezidingo; ukudlidlizela kwe-proton kabili kuqinisekisa ukunyakaza okuqondile kwesikrini sokudlidliza imvamisa ephezulu; inani eliphakeme le-G, umthamo wokucubungula omkhulu, umphumela omuhle wokuphelelwa amandla kwamanzi.
Isikrini esiphelele sokudlidliza kwemvamisa ephezulu siqukethe ibhokisi lesikrini, isivuseleli sokudlidliza nedivayisi yokumunca ukushaqeka. Isikhuthazi sokudlidliza sifakwa engxenyeni engenhla yebhokisi lesikrini futhi sithambekele ku-45 ° nebhokisi lesikrini. Isikhuthazi esidlidlizelayo esidonswa yimoto siqhutshwa yimoto ukukhiqiza amandla okuzijabulisa ku-45 ° ebusweni besikrini. Ngaphansi kwesenzo samandla ajabulisayo, ibhokisi lesikrini lenza ukunyakaza okuqondile nge-engeli yokuqagela engu-45 °.
Idivayisi yokudlulisa: imoto ne-vibrate exciter zixhunywe ngokudluliswa kwebhande, okuzinzile futhi okuthembekile, futhi kunganciphisa umthelela wokudlidliza emotweni.
Idivayisi ye-Vibration isolation: insimbi yekhoyili yensimbi isetshenziswa njengedivayisi yokudlidliza, enezimpawu zokuphepha, ukuthembeka kanye nempilo ende.
Ibhokisi lesikrini: isikrini sokudlidliza samanzi aphakeme kakhulu sisebenzisa ukwakheka kohlaka, ipuleti eseceleni lisebenzisa wonke umsebenzi obandayo wepuleti, akukho ukushisela, amandla amakhulu, impilo yenkonzo ende; ugongolo kanye ipuleti ohlangothini axhunywe ephezulu amandla imishudo, okuyinto elula yesondlo; ngokusho kokuhlolwa ngokuya ngezidingo, ukuthambekela kobuso besikrini kungalungiswa ngokushintsha ukuphakama kokusekelwa kwentwasahlobo; ngokuya ngezidingo zokuhlukaniswa kwempahla, ibhokisi lesikrini linezinhlobo ezahlukahlukene zokwakheka ezifana nesendlalelo esisodwa, isikrini esinezendlalelo ezimbili, nesikrini semigqa eminingi.
Izici zesikrini sokudlikiza semvamisa ephezulu
Umsindo ophansi nokugcinwa okulula.
Isakhiwo esinengqondo, esiqinile futhi esiqinile.
Umphumela omuhle wokuphelelwa amandla kwamanzi, uphephile futhi unokwethenjelwa.
Umthamo omkhulu wokucubungula ukuhlolwa nokusebenza kahle kokuhlola okuphezulu.
Isisindo esincane, ukuqaqa okulula nokuhlangana, nokugcinwa okulula.
Izinzuzo zokusebenza kwesikrini sokudlidliza kwemvamisa ephezulu
Isidlidlizi sokudlidliza sesikrini sokudlidliza okwehlisa imvamisa esiphezulu kulula ukusishintsha. Isiphethu senjoloba esisekelweni sisetshenziselwa ukuncela ukudlidlizela, ukuze i-amplitude ingabi nkulu, nokudlidliza okuhamba kancane kungasuswa ngokuhlanzeka.
Kungenziwa ngezifiso ngokuya ngokukhipha nomswakama okuqukethwe. Amapaneli asemaceleni we-fuselage afakwe amapuleti okuqinisa, phansi kufakwe izisekelo, phansi kushaywa ngemigoqo evundlile, futhi itheku lokukhipha lisekelwa izingcwecwe zensimbi ezingunxantathu.
Intwasahlobo emanzi yesikrini iyintwasahlobo yenjoloba, futhi ikhwalithi yasentwasahlobo izothinta impilo yesikrini.
Isikrini sokudlikiza semvamisa ephezulu sisebenzisa ubuchwepheshe obunemishini yokuzivumelanisa nobabili, ibhulokhi le-eccentric, kanye nesidlidlizi se-amplitude. Isikrini sakhiwa ibhokisi lesikrini, isivuseleli sokudlidliza, uhlelo olusekelayo kanye nemoto. Ama-vibrator amabili angaxhunyiwe asebenza ngokuvumelanayo nangokubuyela emuva. Amandla we-centrifugal akhiqizwa amasethi amabili kaquqaba we-eccentric aphakanyiswe eceleni kwe-vibration direction, futhi i-reverse centrifugal offset is offset, ngaleyo ndlela yakha ukudlidliza okukodwa okuthokozisayo ngokuqondiswa kokudlidliza, okwenza ibhokisi lesikrini liphindisele ukunyakaza komugqa.